WARBIXIN: Real Madrid Oo Go,aan Kama Dambays Ah Ka Gaartay Mustaqbalka BBC – Kooxda.com
Home 2017 August Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Real Madrid Oo Go,aan Kama Dambays Ah Ka Gaartay Mustaqbalka BBC
WARBIXIN: Real Madrid Oo Go,aan Kama Dambays Ah Ka Gaartay Mustaqbalka BBC
August 12, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in aanay wax weeraryahan ah la soo saxiixan doonin xagaagan kadib markii ay qiratay in looga adkaaday saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Monaco ee Kylian Mbappe oo ku biiri doona kooxda Paris Saint-Germain.
Wargayska Marca ayaa sheegaya in ay maamulka Real Madrid iyo macalin Zinedine Zidane ay isku raaceen in ay kooxda ku daayaan sida ay haatan tahay kuna tiirsanaadaan BBC kadib Xilli PSG ku dhowdahay saxiixa Mbappe.
Kooxda reer Frnace oo dhawaan Neymar kula soo saxiixatay heshiis rikoorka adduunka ah oo dhan 200 Milyan euro ayaa la sheegayaa in ay ogolaatay in ay da,yarkana kula saxiixato lacag dhan 180 Milyan euro.
Si kasta aha ahaatee Kooxda Real Madrid ayaa gaartay in ay isaga harto baacsiga xiddigan kadib markii uu Ronaldo go,aansaday in uu kooxda ku sii sugnaado iyo kadib markii uu Bale kooxda ugu hanjabay in uu kooxda ka tagi doono hadii ay la soo saxiixdaan Mbappe.
Real Madrid ayaa filaysa in ay kalsoonida siiso Bale xilli ciyaareedkiisii 5-aad ee uu ku qaadanayo kooxda ku ciyaarta Santiago Bernabeu.
Karim Benzema ayaa sidoo kale khatar ka dareemay xiddiga reer Spain ee Alvaro Morata iyaga oo ugu dambayn iska fasaxday xiddiga reer France si ay u ilaaliso BBC.
Xiddigaha BBC ayaa mar kale noqday xiddigo lama taabtaan ah sidii ay ahaan jireen wakhtiyo hore waana xiddigaha xilli ciyaareedka danbe hogaamin doona kooxda.
Tababare Zidane ayaa la filayaa in uu kulanka Barcelona ee Axada ku soo galo shaxda 4-3-1-2 iyaga oo weerarka iska mataanayn doonaan xiddigaha Bale iyo Benzema halka Isco laga yaabo in uu buuxiyo booska Ronaldo oo aan wali taam u noqon in uu u ciyaaro kooxdiisa.